IJewel Box Cottage eMaysville KY
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAshlee
Wamkelekile kwiJewel Box Cottage kwimbali yaseMaysville, eKentucky. Eli khaya legcisa lika-1930 linamagumbi okulala ama-3 kwaye lilala ama-6. Ukhupha umtsalane kwaye unendawo ekhethekileyo kwindawo yembali yedolophu. Hamba ngembali yaseKentucky njengoko usiya kwiivenkile zokutyela edolophini, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela kunye nePromenade ecaleni koMlambo iOhio. Akamhle nje, ingaphakathi lifumene "Glow Up" ngo-2020 ngumhombisi ophezulu kwaye uneebhedi ezitofotofo, iitawuli zodidi kunye nezihlalo ezaneleyo. Ibhokisi yeJewel yokwenyani
Emva kokuba uwele kwiveranda engaphambili kwaye ungene ekhaya uya kuhlangatyezwa ligumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi eligcweleyo, i-1/2 yokuhlambela kunye negumbi elimangalisayo "leJewel". Ukwenyuka kwizinyuko zamaplanga ezikhethekileyo ukuya phezulu uya kufumana ibhafu epheleleyo, amagumbi okulala ama-3 (ama-2 aneebhedi zokumkanikazi enye enebhedi yenkosi) kunye neveranda yokulala ejikelezwe ziifestile ezinkulu. Ngaphandle kukho ivaranda engaphambili apho unokuthatha umzuzwana, abantu babukele kwaye bonwabele isandi sedolophu. Ngasemva yiyadi engabiyelwanga enepatio yamatye.
Kumgangatho ongaphantsi uya kufumana iwasha enobungakanani obugcweleyo kunye nesomisi ukuze uyisebenzise.
Ihlala kanye kwincam yembali yedolophu yaseMaysville, eKentucky. IMaysville yindawo yokuqala yokumisa kwindlela ye-bourbon. I-JewelBox likhaya losapho olunye elakhiwe ngo-1930 isitayile seengcibi. Iye yahlaziywa ngelixa igcina imbali yayo kunye nomtsalane. Ikwikona enkulu enendawo yokupaka ezitalatweni kunye ne-driveway encinci. Ukupaka kwindawo esembindini wedolophu kunokuba ngumba, kodwa akuyongxaki kweli Khaya. Ungahamba ngokulula ukuya kwiivenkile zokutyela kunye neevenkile kunye noMlambo waseOhio.
Umbuki zindwendwe ngu- Ashlee
Iyafumaneka nanini na usidinga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maysville